Falanqeynta: Newcastle vs Man United: Jose oo u safri doono garoon uu aad u neceb yahay inuu ku ciyaaro
Thursday, January 24th, 2019 - 09:01:28
Sunday February 11, 2018 - 02:30:02 in Wararka by
Kooxda Manchester United ayaa u safri doonta garoonka St. James Park oo ah garoonka ay kulamo lagu xaqiijinayo horyaalka kula loolami jirtay kooxda Newcastle oo uu hogaaminayay Kevin Keegan, basle waxay hadda booqaneysa xilli ay kooxda dhawaan dib ugu soo laabatay horyaaalka dagaalna ugu jirta sidii ay baaqi ugu sii ahaan lahayd.
Jose iyo Kooxdiisa ayaa doonaya in ay ilaashaadaan booskooda labaad isla markaana ay xoogga sii saaran sidii ay Man City usoo yaren lahyad dhbcaha ay ku hogaamineyso horyaalka.
Newcastle United ayaa dhankeeda beegsaneysa in ay uga soo fogaato diilinta gaduudan ee loogu laabanay heerk alabaad waxayna hadda kujirtaa kaalinta 16-aad kaliya hal dhibic ayeyna u jirtaa qatartaas.
Kulanka: Newcastle United vs Man United
Saacadda 5:15 Galabnimo PM
Garoonka: St. James Park
Garsooraha: Craig Pawson
Rafeal Benitez ayaa go'aan ka gaaray xaalada weeraryahanka Islam Slimani ka hor kulanka maanta ee ay la ciyaarayaan Manchester United.
Laacibkan ayaa amaah uga soo biiray kooxda Leicester waxaana soo gaaray dhaawac dhanka bowdada ah, waloow uu tababarkala qaatay kooxdiisa qaatay, sshaki aya ala gelinayaa taam ahaanshahiisa.
Ciaran Clark oo dhaawac jilibka qabay iyo Mohamed Diame ayaa diyaar u ah kulankan ineey ciyaaraan , laakiin daafaca buuxa ee Jesus Gamez oo canqawga ka dhaawacan ayaa la safan doonin ciyaartan
Dhanka United , Zlatan Ibrahimovic ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda labo maalmood ka hor, laakiin weeraryahanka reer Sweden ayaan diyaar u noqon doonin kulankan.
36 -jirkaan ayaa la siiyay heshiis cusub oo hal sanno ah ka dib markii uu si fantastik ah uga soo kabsaday dhaawac jilibka ah oo bishii April soo gaaray, lakiin waxa uu u ciyaaray kaliya todobo kulan ka hor inta uusan dhaawac kale oo jilibka ah la kulmin.
Waxaa kulankaan Man United ka maqnaan doono Eric Bailly oo canqawga ka dhaawacan Daley Blind iyo Marouane Fellaini oo dhaawac Jilibka ah Qawo.Waxaa shaki la gelinayaa xaalada Rashford iyo Jones kuwaas oo aan la shaacin dhaawac yada soo gaaray.
Newcastle ayaa badisay labo ka mid ah 28kii kulan ee ugu danbeysay Premier League ee ay la ciyaareen Man United (7 Bareejo 19 kulana waa laga badiyay) wax guul ahna ma gaarin lixdii kulan ugu dambeesay oo ay ciyaaren.
Kulankan wuxuu noqon doonaa kulankii 200 aad ee Newcastle ciyaarto maalin Axad ah kaliya kooxaha Tottenham Hotspur (79), Liverpool iyo Everton (72 kulan ah)ayaa ka badan waxana ay ciyaartay (70) kulan.
Jose Mourinho lix kulan uu booqday garoonka St. James 'Parkguul kama soo helin 3 barbaro iyo 3 guuldaro
3 bareejo, 3 kalana waa laga badiyay ) halka United guul ay ku gaartay Premier Leagur garoonka St. James 'Park, in ka badan Kooxaha kale(12 Jeer ayee ku badiyeen).
Romelu Lukaku ayaa celcelis ahaan gool dhalinayey ama caawinaayay 65 daqiiqo kasta oo uu ka hor tagay Newcastle horyaalka 6 gool wuu ka dhaliyay 4 kalena cawiye ayuu ka noqday.
Man United ayaa badisay 9 kulan oo ka mid ah 13-ki kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay kooxda Newcastle kana dhacday garoonka St James Park.